शिक्षा Archives - Page6of 24 - Dna Nepal
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि व्यवस्थित पूर्वाधार आवश्यक : प्रमुख जि.सी ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०१:२५
पोखरा, कार्तिक ३० । विगत २६ वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको पार्दि स्थित फिष्टेल एकेडेमिले शुक्रबार अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको नवनिर्मित विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जिसीले..
राष्ट्रिय शिक्षा नीति मौलिकतारहित भएको आरोप २४ कार्तिक २०७६, आईतवार ११:३२
काठमाडौं, कार्तिक २४ । सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मौलिकतारहित रहेको मौलिक जरोकिलो पार्टीले जनाएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले यही कात्तिक १८ गते स्वीकृत गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले..
फुलबारी मन्टेश्वरीको १९ औँ वार्षिकोत्सव तथा ११ औँ अभिभावक दिवस सम्पन्न २३ कार्तिक २०७६, शनिबार १३:००
पोखरा, कार्तिक २३ । फुलबारी मन्टेश्वरी कटेज प्रि एण्ड वेसिक स्कुलको १९ औँ वार्षिकोत्सव तथा ११ औँ अभिभावक दिवस एक कार्यक्रमकाबिच सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सांसद विन्दु कुमार थापाले निजि क्षेत्रबाट खुलेका..
यस्तो पो समाजसेवाः चन्दा उठाएर घान्द्रुकमा ‘प्लस टू’ २ कार्तिक २०७६, शनिबार १५:५०
पोखरा, कार्तिक २ । कास्कीको घान्दु्रकमा रहेको मेश्रम बराह माविमा गाउँलेले चन्दा उठाएर उच्च मावि सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले सहयोग नगरेपछि विभिन्न देशमा बस्ने घान्द्रुकेहरुकै सहयोगबाट स्कूलमा शिक्षकको तलव र भौतिक पूर्वाधार निर्माण भैरहेका..
पढ्ने कलाको विकास गर्न डायमण्डमा दोस्रो पढाइ महोत्सव १२ आश्विन २०७६, आईतवार १४:३४
लेखनाथ, असोज ११ । बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा महानगरपालिकाको तालचोकमा अवस्थित डायमण्ड माविमा दोस्रो पढाइ महोत्सब सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगर वडा नं. २७ का वडा अध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङ्ग प्रमुख..
पढ्ने कलाको विकास गर्न डायमण्डमा दोस्रो पढाइ महोत्सव ११ आश्विन २०७६, शनिबार १२:५६
लेखनाथ, असोज ११ । बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा महानगरपालिकाको तालचोकमा अवस्थित डायमण्ड मा.विमा दोस्रो पढाइ महोत्सब सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नर्सरीदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीको..
डायमण्डमा दोस्रो पढाइ महोत्सवको तयारी ६ आश्विन २०७६, सोमबार ११:५१
लेखनाथ, असोज ६ । पोखरा महानगरपालिका तालचोकस्थित डायमण्ड माविले दोस्रो पढाइ महोत्सव गर्ने भएको छ । विद्यार्थीको पढाइमा अभिरुचि बढाउनुका साथै पढ्ने कलाको विकाश गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष पनि विद्यालयले पढाइ महोत्सव गर्न लागेको जनाएको छ ।..
कपडा व्यवसायी एशोसियसन कास्कीद्वारा शैक्षिक सामाग्री वितरण ४ आश्विन २०७६, शनिबार ०१:०२
पोखरा, असोज ४ । कपडा व्यवसायी एशोसियसन कास्कीले रुपा गाँउपालिका वडा नं. ६ स्थित शारदा आधारभुत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राछात्रहरुलाई शैक्षिक सामाग्री तथा ड्रेस प्रदान गरेको छ । संविधान दिवस २०७६ को अवसरमा शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान..
लायन्स क्लब अफ पोखरा गण्डकीद्वारा ३६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:१७
पोखरा, असोज ३ । विश्वको पहिलो महिला क्लब लायन्स क्लब अफ पोखरा गण्डकीले आर्थिक रुपमा विपन्न ३६ जना जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र उद्यमशिलतामा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको क्लबले..
पोखरा, असोज ३ । शैक्षिक चेतनामुलक नेपाली वृत्तचित्र कखरा को प्रिमियर शो पोखरामा सम्पन्न भएको छ । युनाईटेड क्लव पोखराको आयोजनामा पोखराको बाराही सिनेमा हलमा प्रदर्शन गरिएको कखरा वृत्तचित्रको पोखरामा रहेको विभिन्न शिक्षा संग सम्बन्धित संघ..